I-EA012 ye-OMG ekhubazekile / i-Handicap Toilet Alarm System - $ 280 - Izixazululo ze-OMG
I-EA012 ye-OMG ekhubazekile / i-Handicap Toilet Alarm System - $ 280
I-EA012 Ukukhubazeka / Ukukhubazeka Kwe-Alarm System i-alamu elula yokufaka i-toilet ekhutshaziwe ne-aesthetics yanamuhla nokusebenza okuphezulu.
I-alamu yangasese ekhutshaziwe ibalulekile ukuvumela abantu abakhubazekile ukuba baqaphele abasebenzi nabamenenja ukuthi usizo luyadingeka endlini yangasese noma indlu yokugezela ekhubazekile.
Loluhlelo lwe-alamu yangasese olukhutshaziwe, lapho isitayela sesifinyelele khona umsebenzi ekuklanyeni, singasetshenziswa ngokuphumelelayo kwezicelo eziningi ezindaweni zokuphumula ezikhutshaziwe ezindaweni zokudla kuya ezibhedlela.
Leli kit lidilizwa liphelele ngendwangu yokudonsa insimbi ngamasongo amabili, i-reset unit ne-Braille umbhalo, isibonakaliso esihlanganisiwe esicacisayo / esicwebezelayo. Isitika esikhubazekile siphinde sinikezwe.
Inkambo yokudonsa, obomvu obombala ukubonakala okuphezulu, inezindandatho ezimbili okufanele zibekwe ezindaweni ezithile - kufanele kube yi-100mm kuphela ukusuka phansi kanti enye kufanele ibe ukuphakama kwe-800-1000mm, etholakala ku-WC. Inkinobho yokusetha kabusha, ene-sounder ekhombisa umuntu okhubazekile ukuthi usizo liseyindlela, kufanele futhi itholakale ekufinyeleleni kwe-WC, ku-1200mm ukusuka phansi.
Isibonisi sosizo oluphuthumayo kufanele sifakwe endaweni ebonakalayo kakhulu ngaphandle kwekamelo lokuphumula lapho lizobonakala khona kalula futhi umsindo ozozwakala kalula.
Ukufaka le nsimbi engenalutho kungakhutshazwa uhlelo lwe-alamu ye-toilet kusiza abanikazi bomhlaba nabamabhizinisi ukuthi bahlangabezane nokulandela i-DDA, i-BS8300 nezinye izindinganiso ezihlukahlukene zokunakekelwa.
Amaphuzu amathathu kuphela okumele afakwe ohlelweni olujwayelekile
Lolu hlelo lungasetshenziswa kalula kwezinye izinhlelo
Uhlelo lulula ukwandisa njengoba ukwanda kwezimfuneko
Amayunithi amaningi okubonisa ama-remote avela
Ihlinzekwa ngamawele amabili edonsa izindandatho
Iyunithi inikezwa isitifiketi somuntu abakhubazekile
Uhlelo lusiza ekuqinisekiseni ukuhambisana neDDA, BS8300 nezinye izindinganiso zokunakekelwa
Iphelile emhlophe ukuze ivumelane ngokucophelela kunoma yikuphi ukuhlobisa noma imvelo
Beka ngezansi umdwebo obonisa ukuma kweyunithi ngaphakathi kwezikhungo ezikhutshaziwe
I-OMG-Solutions - I-Alarm Kit Kit yokukhubazeka - umdwebo obonisa ukuma kweyunithi ngaphakathi kwezikhungo ezikhubazekile
Ukubuka okuphelele kwe-2446 Ukubuka kwe-2 Namuhla